Uhlaziyo olutsha lweTelegram longeza ukhuphelo oluzenzekelayo kunye nokudlalwa kweevidiyo | I-Androidsis
Ngokwenyani ukusukela oko iTelegram yafika emarikeni, uninzi lwethu yayingabasebenzisi abaqala ukuyisebenzisa, kuba bezama nje ukubona ukuba isebenza njani kwaye isinika ntoni. Sikwazile ukukuqinisekisa ngokukhawuleza oko ukuguquguquka okusinike kona ngokunika usetyenziso lwayo yonke indalo, esona sizathu siphambili sokuba siyamkele ngezandla ezishushu.
Ukusukela ngoko, isicelo asikenzi okungaphezulu koku yongeza amanqaku amatsha ukuphucula ngakumbi into ebesele iapp efanelekileyo kubo bonke abasebenzisi abachitha iiyure ezininzi phambi kwekhompyuter kwaye kufuneka babelane ngalo naluphi na uhlobo lwefayile rhoqo. I-Telegraph ihlaziyiwe nje ngokongeza imisebenzi emibini enomdla kakhulu esineenkcukacha apha ngezantsi.
Ukuba usebenzisa iTelegram rhoqo, kunokwenzeka ukuba ubhalise kwiindlela ezahlukeneyo okanye kumaqela apho ulwazi kwabelwana ngalo, nokuba kukwiteksti, ividiyo okanye ifomathi yomfanekiso. Kwimeko yeevidiyo, kuxhomekeke kuqwalaselo esilwenzileyo, ividiyo inokukhutshelwa ngokuzenzekelayo, esisinyanzela ukuba ucofe kwi-thumbnail ukuyidlala. Kude kwaba ngoku, ukusukela ngohlaziyo lokugqibela, xa sifika apho ikhoyo ividiyo, oku izakuqala ukudlala ngokuzenzekelayo.
Umsebenzi we ukhuphelo kunye nokudlala kunokukhubazeka ngokuzenzekelayo ngokupheleleyo, ukubanakho okusivumela ukuba songe kwiqondo lethu ledatha, ukuba sisenamazinga ama-2 okanye ama-4 GB.
Enye into entsha, siyifumana kwifayile ye- iinketho ezintsha zokuphuma. Ngokucofa olu khetho, ukhetho olwahlukileyo luya kuboniswa, ukhetho oluhlengahlengisiweyo ukuze lusebenze ngendlela esinokuthi siyenze kwinkonzo esifuna ukuyenza.
Ukuba awukasithathi isigqibo sokuzama iTelegram, unokuzikhuphela ngqo kwikhonkco elingezantsi kwaye ubhalise ukuya kujelo loluntu lwaseAndroisis, apho unokufumana khona iingcebiso, amaqhinga, izifundo…. Unokumisa ngenye inqaku apho sikubonisa khona amaqhinga amahlanu ukuze wenze iTelegram okanye unokufumana okuninzi kuyo ukwazi zeziphi ezona bots zibalaseleyo zeTelegram kweli nqaku linye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uhlaziyo olutsha lweTelegram longeza ukhuphelo oluzenzekelayo kunye nokudlalwa kweevidiyo
I-OUKITEL iveza iifowuni zayo ezintsha kwi-MWC